﻿﻿ FPTAF - Ampy ho anao ny Fahasoavako
2 Kor 12:9-10 Nefa hoy Izy tamiko; Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa mainka sitrako ny hirehareha amin'ny fahalemeko, mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko. Koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana, noho ny amin'i Kristy; fa ny fahalemeko no fahatanjahako.
Nefa hoy Izy tamiko:
fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena! (2 Kor 12:9a)
Takila iray no mivadika!...
Tsy takatry ny saina ny fitondran'Andriamanitra mahasoa ny Fiangonana Protestanta Tranovato Ambohimalaza Firaisana, ka isaorantsika Azy izany fitiavany izany! Noho izany, mandroso isika, mampiasa ity tranon-kalam-pifandraisana ity (site web), ho amin'ilay fifankatiavana maharitra, tarafina avy amin'ilay Fitiavan'i Kristy!
Misy toetra ratsy ilaina esorina (1 Pet.2:1): "ny lolom-po rehetra, ny fitaka rehetra, ny fihatsaram-belatsihy, ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra". Ary misy toetra tsara tsy maintsy ananana (Jao.13:34): "mifankatia tahaka ny nitiavan'i Kristy antsika, mba ho fantatry ny olona fa mpianatry ny Tompo isika!" Ary mitandrema tsara, fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ; fandrao hisy faka mangidy mitsimoka hampikorontana, ka ho voaloto ny maro! Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana! (Heb.12:14). Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara; ary aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa, mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro! Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fihatsaram-belatsihy ; mankahalà ny ratsy ; mifikira amin'ny tsara! «Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy ; mitariha làlana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Mazotoa, fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo !» (Rom.12:9-16) Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino kosa ho amin'ny famonjena ny fanahy! (Heb.10:39). Koa iangaviana àry isika samy hamaky indray ny Jakoba 3:1-18 sy ny Jakoba 4:1-17. Koa iza eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana? Aoka hasehony amin'ny fitondrantena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahin'ny fahendrena!
Fa raha misy fialonana mirehitra (mangidy) sy fifampiandaniana ao am-ponareo, aza mirehareha na mandainga hanohitra ny marina! Izany fahendrena izany dia tsy avy any ambony, fa araka ny ety an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny an'ny demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mbamin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindram-po sy be voka-tsoa, tsy miahanahana (na miangatra) na mihatsaravelatsihy! Fa izay mampandroso ny fihavanana no mamafy ny vokatry ny fahamarinana amin'ny fihavanana! Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana! Koa aoka àry isika ho faly foana hanompo ny Tompo, na mandalo fitsapana aza! (2 Sam.6:1-23). (Rom.5:5). (Fil.4:4) .
Hotahian'ny Tompo Andriamanitra anie isika, na aiza na aiza, na oviana na oviana, ka hanana amby ampy izay hahasoa antsika, sady hovohany ho antsika ny tranony fitehirizan-tsoa, ary hataony ho lohany isika fa tsy rambony! Ary Andriamanitry ny fanantenana anie hameno antsika amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoantsika, mba hitomboantsika amin'ny fanantenana noho ny herin'ny Fanahy Masina! (Rom.15:13) «Fa ampy ho anao ny fahasoavako, hoy ny Tompo, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena ! » Izany hoe : Ny Finoana sy ny Fanantenana mbamin'ny Fitiavana no hahatonga antsika haharitra sy hiaritra amin'ny Fanompoana ny Tompo, ka hifaly amin'izany fa tsy hikizaka (hanome tsiny ny hafa foana). Ny fiaretana ny mafy eo anivon'ny Fanompoana no hiteraka fifaliana ho an'ny mpanompo tsara sady mahasoa, ka hivazina (hanafoana ny tena ka hietry).
Ilaina ny fanavaozana amin'ny fomba fiasa izay tsy maintsy ialohavan'ny fihavaozan'ny toe-tsaina sy ny fiovam-po. Ary ny Fanahy Masina ihany no hampaharitra an'izany = Manamasina! Fitiavana sy fifaliana no vokatry ny Fanahy Masina, ka hahatonga ny mpino ho faly hampiasa ny Talentany, am-pitiavana, ho fampandrosoana ny Fiangonana (eklesia), eo ambany Fahasoavan'ny Tompo sy ny Heriny! Tsy misy tokony hampimalo antsika (mampahatahotra ka mahakivy ambony ihany) ny zavatra hitranga amin'ny ho avy rehetra, satria: "Ampy ho antsika ny Fahasoavan'ny Tompo, fa ny Heriny dia tanterahina amin'ny fahalemena!" Izany no Foto-kevitra lehibe banjinintsika FPTAF ka nahavitantsika Hira Faneva tamin'ny Desambra taona 2016 teo, "Fa ampy ho anay ny fahasoavanao"! Efa nianarana nandritra ny volana maro, ho raketina amin'ny kapila mangirana (CD) ka atolotra ny Fiangonana amin'ny Pentekosta ho avy izao (04 Jona)! Ho ampitomboina amintsika anie ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fiadanany! Amena!
Ny Herin'i Kristy tanterahina amin'ny Fahalemena!
Naniraka an'i Mosesy Jehovah:- "Maniraka anao ny Tompo ankehitriny!"
Hoy Mosesy tamin'i Jehovah: " tsy mahay mandaha-teny aho, fa votsa vava sy miadam-piteny" [...] Tsia, Tompo ô! Mifona Aminao aho! Miangavy anao aho! Iraho izay tianao hirahina, fa tsy izaho. " (Eksodosy 4:10, 13)
Mosesy mazava tsara loatra, fa tsy natoky tena sady olona ambany, malemy. Voafidy hiteny tamin'ny Hebreo andevo tany Egypta anefa izy, sy amin'i Farao, mpitondra fanjakana ambony. Ka hoy Jehovah taminy : "Izaho no mpamorona ny vava", koa aza matahotra ianao! Momba anao aho!
Tsy ny herinao no iankinanao fa ny herin'Andriamanitra izay maniraka anao! Rehefa miantso anao ny Tompo mba hanao fanompoana, Izy no momba anao! Aza mialan-tsiny, aza mimalo, aza kivy fa aoka handroso hatrany! Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy! (Hebreo 10:38-39) . Hiatrika ny fahamarinana, hiatrika asa sarotra: ny Tompo no mamporisika sy mampahery anao! Aza matahotra! Aza manahy, ary aza misalasala ny fahaiza-manao satria Izy no mpizara ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta! Minoa fotsiny ihany! Apetraho tsara ny fahatokiana Azy, fa tsy handao anao, tsy hahafoy anao Izy." (Matio 28:18-20)
Eny, mety hisy fotoan-tsarotra ho lalovanao: ianao hanana olana misesisesy mifandimby, ny mpanohitra hanozongozona anao, sns... fa hisy ihany koa anefa ny fotoana fifaliana, hamirapiratan'ny fandresenao miaraka amin'ny Tompo!
Tsy toe-tsaina sy fijery mora kivy (négativiste) mba tsy ilazako hoe (pessimiste), fa toe-tsaina sy fijerin'ny mpandresy (positiviste) mba tsy ilazako hoe (optimiste) no tokony hanananao, satria mihoatra noho ny mpandresy isika (plus que vainqueur) amin'ny alalan'Ilay tia antsika, dia Jesoa Kristy! Tsarovy àry fa "Ampy ho antsika ny fahasoavan'ny Tompo, fa ny Heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena!" (2 Kor. 12:9) Koa mahereza! Alao hery, ry havana! Miantso sy maniraka anao ny Tompo hanao ny asa fanompoana!
Tanjona iray tokony ho tratrarinao àry ny ho tia an'Andriamanitra, ka sahy hanaparitaka ny Teniny, hampiely ny Fitiavany mba hahatonga ny olona maro handray ny Fahasoavany, manomboka eto Ambohimalaza ka hatramin'ny faran'ny tany! Ho vita ve izany? - Manàna finoana! Ho ampitomboina aminareo anie ny fahasoavan'ny Tompo! Ho amintsika anie ny fiadanan'i Kristy Jesoa! Amena!
Mpitandrina Philippe Rakotoson
Fa ampy ho anay ny fahasoavanao!
HIRA FANEVA: "Ampy ho anay ny Fahasoavanao!" 29/12/2016
Isan'and.: Fa ampy ho anay ny fahasoavanao
Ry Jesoa Kristy Zoky tia anay;
Ho Tranovato mandroso izahay,
Ny Herinao iankinanay!
1.Ry Jesoa ô, tsy takatry ny fo
Ny fitiavana natolotrao;
Fa tsinontsinona izao rehetra izao
Raha tsy tena miankina Aminao!
2.Ry mpino ô, mitsangàna izao
Fa vavolombelon'i Kristy ianao:
Ho tena fiangonana filamatra,
Taranaka Hendry sy ho vanona!
Isan'andininy: "Fa ampy ho anay ny fahasoavanao!"
3.Ampianaro izahay, ry Tompo ô!
Hifankatia sy hifamindra fo;
'Reo fitahiana natao ho fandresena
Ho tanterahina amin'ny fahalemena!
4.Raha sendra ady mafy izahay,
Ny Teninao no toky hiorenanay.
Tafio ny Fanahy Masinao,
Ho ampinga sy fiarovana mandrakizay!
Ho Tranovato mandroso izahay, Ny Herinao iankinanay!
Ambohimalaza Firaisana izahay: Ny Herinao iankinanay!
(II Kor.12:9) "Ampy ho anao ny fahasoavako!"
Tonony sy Feony:- Razafindrakoto Tiana Harivony
Tonon-kalo tamin'ny Alahadin'ny Mpitandrina
Misaotra indrindra Pasitera amin'ny fahafoizan-tena,
Eo am-pamitana asa sy ny adidy sesehena!
Dia matokia sy minoa fa Andriamanitra mahita
Hanampy sy hanolo-tanana hanefàna izay tsy vita!
Dia Izy anie hitahy, hiaro sy hanampy anao,
Hitari-dalana hanoro amin'izay rehetra atao!
Raha sendra tojo olana, dia mazotoa, miràna endrika;
Fa ny miaraka amin'ny Tompo: "ny sambo indray tsy mety rendrika!"
Fa na mamely ny tadio,
Dia izao no tadidio:
"Na ny rivotra hifofo, na hidoboka ny onja,
Dia inoy sy itokiso, fa teny iray monja,
Avy amin'Ilay Andriamanitra ao ambony
Sy ny famindram-pony, dia ampy hampitony!"
Koa mahereza, mahatanjaha!
Fa ny Tompo no hitahy!
Koa ny fiainanao anie ho feno fitahiana:
Ho ambinin-tsoa sy feno fifaliana!
Ho an'Andriamanitra anie ny Voninahitra,
ary ho anao sy ny ankohonanao ny fiadanany!
Holy Rakotoandrianoela Razafindravah (Alahadin'ny Mpitandrina 07/05/2017)